Udibaniso lweMarketplace-Ipropars E-export kunye neAmazon, Ebay, Allegro kunye neEtsy
Ukudityaniswa kweMarike yeHlabathi
Zisa intengiselwano yakho ye-e-yorhwebo kunye kwiqela elinye kwaye ulawule ngokuzenzekelayo!
Amazwe ama-5 eMarike
Indawo yentengiso yasePoland
Indawo yentengiso yaseFrance (Kungekudala)
Imarike yaseJamani (Kungekudala)
Indawo yentengiso yaseArabhiya
Ehlabathini lonke (Kuza kungekudala)
Inkqubo ye-ERP / Accounting
Iqonga lezentengiso ye-E
Ipropars yinkqubo yokuququzelela urhwebo enokusetyenziselwa naliphi na ishishini elirhwebayo. Igcina amashishini ekusebenziseni iinkqubo ezizodwa kwiimfuno zabo ezahlukeneyo, kwaye igcina amashishini ixesha kunye nemali. Enkosi kumanqaku ayo amaninzi anje ngokulawulwa kwesitokhwe, ulawulo lwangaphambi kokubalwa kwemali, iodolo kunye nolawulo lwabathengi, amashishini anokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zawo phantsi kophahla olunye.
Zeziphi izinto ezinazo iiPropars?
Iipropathi zinoLawulo lweeMpahla, uLawulo lokuThenga, uLawulo lwe-Akhawuntingi, uLawulo lwe-E-commerce, uLawulo lwee-odolo, amanqaku oLawulo lwaBathengi. Ezi modyuli, nganye kuzo ibanzi kakhulu, yayilelwe ngokuhambelana neemfuno zee-SMEs.
Luthetha ntoni ulawulo lwe-E-Commerce?
Ulawulo lwe-E-commerce; Oko kuthetha ukuba ufikelela kwizigidi zabathengi eTurkey nakwihlabathi liphela ngokuzisa iimveliso ozithengisayo kwishishini lakho kwi-intanethi. Ukuba unePropars nawe, ungathandabuzi, ulawulo lwe-e-commerce lulula kakhulu ngePropars! Iipropathi zizenzela uninzi lweenkqubo eziyimfuneko kwaye zikunceda ukuba ufezekise urhwebo lwe-e.
Zeziphi iindlela ze-e-commerce apho iimveliso zam ziya kuthengiswa kunye nePropars?
Kwiimarike ezinkulu zedijithali apho abathengisi abaninzi abanjengo-N11, Gittigidiyor, Trendyol, Hepsiburada, Ebay, Amazon kunye ne-Etsy bathengisa iimveliso zabo, iiPropars ngokuzenzekelayo zibeka iimveliso kwintengiso ngokucofa kanye.
Ndingazihambisa njani iimveliso zam kwiPropars?
Ukuze iimveliso zakho ziqhubeke zithengiswa kwiimarike ezininzi ze-intanethi, kwanele ukuzidlulisela kwiPropars kube kanye kuphela. Ukulungiselela le nto, amashishini amancinci anenani elincinci leemveliso anokungena ngokulula kwiimveliso zawo esebenzisa iModyuli yoLawulo lweeMpahla zePropars. Amashishini aneemveliso ezininzi anokufaka iifayile zeXML ezinolwazi ngemveliso kwiiPropars kwaye adlulisele amawaka emveliso kwiPropars kwimizuzwana embalwa.
Ndiqala njani ukusebenzisa iiPropars?
Ungacela isilingo sasimahla ngokunqakraza iqhosha elithi 'Zama ukuSimahla' kwikona ephezulu ngasekunene kwiphepha ngalinye kwaye ugcwalise ifom evulayo. Xa isicelo sakho sifikelela kuwe, ummeli wePropars uya kukubiza kwangoko kwaye uya kuqala ukusebenzisa iiPropars simahla.
Ndithenge ipakethe, ndingayitshintsha kamva?
Ewe ungatshintsha phakathi kweephakeji nangaliphi na ixesha. Ukugcina kunye neemfuno eziguqukayo zeshishini lakho, biza nje iiPropars!
Masikuncede uthathe isigqibo.
Umdibaniso kwindawo yentengiso
Ukuba uthengisa iimveliso kwivenkile yakho kwi-intanethi, uya kufumana imali eninzi kakhulu. Ewe. Wonke umntu uyayazi le nto ngoku. Abanini beevenkile abangakwaziyo ukuhambelana namaxesha kwaye bathi "Iindawo zokuthenga zavulwa, i-intanethi yafika, abarhwebi banyamalala" baqala ukuqonda ukuba abanayo enye indlela ngaphandle kokungena kwi-intanethi nganye. Kwaye eneneni, i-intanethi kunye nokuthengisa kwi-Intanethi ngumsindisi wakho. Abanye benu banokuba nomsindo kule nto kwaye bathi, "Ivela phi le nto, ukuthengisa kwi-intanethi, i-e-commerce, andiyazi ukuba yintoni ...". Nokuba uyathanda okanye awuthandi, i-e-commerce yeyona ndlela yokusinda kwaye ufumane ngaphezulu. Uyabuza ukuba kutheni? Kuba izigidi zabathengi abakude ngeemayile, abangakwaziyo ukudlula phambi komnyango wevenkile yakho, bajonga i-intanethi yonke imihla. Ukuba unevenkile kwi-intanethi, izigidi zabathengi abangasakwaziyo ukuyishiya i-intanethi ngenxa yeefowuni ezihlakaniphile bajikeleza kumnyango wevenkile yakho kwi-intanethi amaxesha amaninzi. Kwiintsuku ezimbalwa, uzifumana ulungiselela iiodolo zeSivas, i-Ankara kunye needolophana apho imithwalo ingahambi khona. Ngokwezibalo zePropars, ivenkile engazibandakanyi kwi-e-commerce kwaye inomlinganiselo weemveliso ze-500 yonyusa ingeniso yayo nge-35% kwiinyanga ezintandathu emva kokuqala kwe-e-commerce. Ngaphezu koko, eli lelona zinga liphantsi elaziwayo. Baninzi kakhulu abaphumeleleyo. Uninzi lweenkampani eziqala i-e-commerce ziqala ukufumana ii-odolo ze-1-2 ngosuku phakathi kweenyanga ezi-10-15 ukuba azenzi mpazamo ebangelwa ngabo. * Abathengi be-Intanethi banethemba ngakumbi kunabo beza kwivenkile yakho. Bakunika amanqaku aphezulu xa befumana iodolo yakho oyipakishe kakuhle kwaye uyithumele ngeentsuku ezi-1-2; uninzi lwabo alulindelanga nto ingako; Isenzo esincinci esikhawulezayo nesithambileyo sanele kubo. Musa ukuxhathisa urhwebo lwe-e. Yiza uqalise ukuthengisa iimveliso kwivenkile yakho kwi-Intanethi, wongeze ingeniso kunye nenzuzo.
Ewe, yeyiphi imveliso kwi-intanethi?iyathengiswa nyani?
ukuthengisa iimveliso kwi-intanethi kukho iindlela ezimbini:
Yakha iwebhusayithi kwaye uthengise iimveliso zakho ukusuka apho,
N11.com, iyahamba, Hepsiburada.com Ukuba lilungu leendawo ezifana nokuvula ivenkile kunye nokuthengisa iimveliso.
Zakhele indawo kwaye uthengise iimveliso:
Ukuba usaqala kwi-e-commerce, le yeyona ndlela inzima kuwe. Kuba kukho izigidi zeesayithi kwi-intanethi, oko kuthetha ukuba unezigidi zabantu okhuphisana nabo. Namhlanje, akulula ukuseta nokulawula iwebhusayithi, ukwandisa i-SEO, ukubeka phezulu kwiindawo zokukhangela njengeGoogle. Ikwayindleko. Ifuna ukwabiwa kohlahlo lwabiwo-mali lwentengiso kunye nokuhlawula iinkampani ezininzi okanye iingcali. Ngenxa yokuba ukuba iwebhusayithi yakho ayinayo i-mobile-friendly, ayinalo uyilo oluhle noluyimpumelelo, okanye ukuba ayiphakamisi phezulu kuGoogle, ngelishwa, ayisebenzi. Endaweni yokwenza utyalo-mali olunjalo kunye neendleko xa uqala urhwebo lwe-e-commerce, qala ngeyona ilula kuqala. Ngoko enye inketho. Ewe, kufuneka ube nesiza esikhethekileyo sakho, sikwixesha langoku ngoku. Kodwa ngelixa usenza i-e-commerce yakho ngokulula kunye nenketho yesibini kwaye ufumane imali, uya kukhathalela indawo yakho ngokuhamba kwexesha.
Ukuthengisa iimveliso kwiindawo ezinje nge-N11, Gittigidiyor:
Nantsi indlela elula nengabizi kakhulu yokuqalisa urhwebo lwe-e. Kukho iindawo ezine ezinkulu eTurkey apho ungangena kwaye uthengise iimveliso. Sizibiza ngokuba zine ezinkulu phakathi kwethu: •N11.com •Gittigidiyor.com •Hepsiburada.com •Sanalpazar.com Uninzi lwezi sayithi zibhengeza kwi-intanethi nakumabonakude ngohlahlo lwabiwo-mali olukhulu kuwe kwaye utsale izigidi zabathengi. Ngamanye amazwi, izigidi zabathengi abatyelela ezi ndawo yonke imihla. sele elungile, ngexabiso eliphantsi Lindela wena. Konke okufuneka ukwenze kukuba ube lilungu lezi sayithi kwaye uvule ivenkile ebonakalayo. Le yindlela engabizi kakhulu xa kuthelekiswa nolunye ukhetho. Bakuhlawulisa ikhomishini njengoko usenza intengiso, kunye nerenti ethile yeevenkile; kodwa amanani alungile. Makhe sifikelele kwingongoma ephambili. Emva kokuvula ivenkile kwezi ndawo, ubunzima be-e-commerce buqala. Kufuneka uthumele intengiso kwimveliso nganye kwivenkile yakho; enokuthatha iintsuku ukuba unamakhulu eemveliso. Kufuneka uchonge ngoko nangoko iimveliso eziphelelweyo kwivenkile yakho okanye umboneleli wakho kwaye uzisuse ngoko nangoko. Kuba ukuba awuthathi phantsi imveliso ongenayo, kwaye ukuba iodolo ingena kuloo mveliso, abathengi baya kuphula amanqaku evenkile yakho kuba awukwazi ukuyithumela kwangoko. Ukuba unamakhulu eemveliso, uya kuba nakho oku rhoqo, ngoko ke inqaku lakho levenkile liya kuhla kakhulu kwaye ivenkile iya kuvalwa yindawo. Ukuba uye wavula ivenkile kwezinye iisayithi, oya kuvula ngokuqinisekileyo xa usonwabela incasa eneziqhamo ze-e-commerce, xa kukho ukuthengiswa kwenye yeziza, kuya kufuneka undwendwele zonke iisayithi kwaye unciphise isixa sesitokhwe. yemveliso ethengisiweyo ngo -1. Kuya kuthatha iintsuku kunye neeyure ukuzama ukuzenza zonke ezi zinto ngesandla endaweni yokugxila ekulungiseleleni iodolo. Uya kuchitha iiyure kwikhompyuter njengoko kufuneka uphendule ngokukhawuleza kwimiyalezo engenayo yabathengi. Kwaye uya kuba neengxaki ezininzi ze-e-commerce ezifana namawaka abanye abathengisi.
Kodwa ungakhathazeki. ngokuba umanyaniso kukho into enjalo.
Yintoni uManyano lweMarike?
Ukudityaniswa kuthetha ukudibanisa amaqonga amabini asebenzayo. Enye yezinto ezisebenzayo apha yinkqubo yolawulo lwentengiso yePropar; enye yenye yeendawo ezifana N11 okanye Gittigidiyor. p kwi-ProparAzar Indawo Integration nantsi lapho. Ngamanye amazwi, i-Propar N11 idibaniswe kunye neendawo zemarike esizikhankanyileyo, ezifana neGittigidiyor, oko kukuthi, ixhunyiwe kuyo, oko kukuthi, isebenza ngokudibeneyo. Iipropas ziye ukudityaniswa kwemarike Ngokuqhagamshela kwezi sayithi, yenza wonke umsebenzi onzima kuwe. Isicelo ukudityaniswa kwemarike yiloo nto ethetha ngayo: Ukudibanisa kunye nokwenza umsebenzi wePropar! Ukuba usebenzisa i-Propar, uya kuqala ulayishe uluhlu lwakho lweemveliso kwiiPropar ngoncedo lwe-XML okanye ifayile ye-Excel. Uluhlu lwakho lwemveliso luya kubandakanya amagama, iikhowudi zesitokhwe, ubungakanani besitokhwe, ulwazi lweenkcukacha kunye neenkcazo zeemveliso. Emva koko, i-Propars iya kwenza wonke umsebenzi onzima ngokuzenzekelayo kwaye isebenzise ulwazi lwemveliso oyilayishile ukuvula nokuvala izibhengezo kuzo zonke ezi ndawo, ukuhlaziya isitokhwe kunye nezinye ezininzi, kwaye awuyi kusebenza.
Yintoni i-XML? I-XML luhlobo lwefayile ejongeka njengefayile ye-Excel njengoko siyayazi, kodwa igcinwe kwi-Intanethi, hayi kwikhompyuter. Ngokuqhelekileyo, ababoneleli bakho baya kuba ne-XML Xa usebenzisa i-Propar, kwanele ukucela i-XML kubaboneleli bakho kwiimveliso onazo kwaye uyilayishe kwi-Propar. Ukuba awunayo i-XML, ungasebenzisa ifayile ye-Excel ngolwazi lwemveliso. Ngale ndlela, ulwazi lwakho lwemveliso lulayishwe kwiiPropars ngobuninzi ngaxeshanye. Ukuba awunalo inani elikhulu leemveliso, ungabhalisa iimveliso zakho nganye nganye kwiiPropar ngaphambi kokuba uqale.